Funda ukuba uyenza njani iphepha leMidlalo kwaye uLonwabo luqale! Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Julayi 7, 2019 0 IiCententarios 901
Imidlalo ihlala ilukhetho olufanelekileyo lokuphelisa isithukuthezi, kufuneka sisebenzise nje ingcinga zethu. Ke, luluvo olukhulu ukufunda ukwenza imidlalo yamaphepha, ilula, inoqoqosho kwaye ihlala ifumaneka kuye wonke umntu.
Mininzi imidlalo yamaphepha, kwaye uninzi lunokwabiwa nabantu abaliqela, ukuvumela ukonwaba nabahlobo kunye nosapho.
Ngaba uyafuna ukwazi ukwenza imidlalo yamaphepha? Apha siza kukwazisa ezinye zeembono ezigqwesileyo. Uya konwaba kakhulu.
Yintoni umdlalo wephepha?
Luhlobo lomdlalo olufuna kuphela iphepha elinye okanye aliqela ukuze ukonwabele, ezinye zikulungele ukusetyenziswa kwepensile. Ngokubanzi, zilula kakhulu kwaye zilula ukulandela imithetho.
Zeziphi iintlobo zemidlalo esinokuthi sizenze ekhaya?
Imidlalo yamaphepha yenye yeyona ndlela ilungele ukubobotheka kwaye apho kunokuba nzima ukonwabisa abancinci. Apha ndiza kwenza ezinye iindlela:
Ngomnye wemidlalo eyonwabisayo kunye nentandokazi yabantwana. Inokwenza umlinganiso onee-tab apho kubekwa khona iileta kunye namanani. Apha ngezantsi kwamanani amabinzana ahambelana nekamva okanye ezinye izihloko.
Ngephepha lesikwere, yigobe ngesiqingatha ngendlela yoxandePhawula imigca ngeminwe yakho kwaye ungazivezi. Emva koko, phinda ulandelise kwakhona ukuze ubonise imigca emitsha ukuze xa uyityhila ikwimo yomnqamlezo.
Songa iphepha kwakhona, kodwa ngeli xesha kufanele ukuba libe ngolwimi. Kuqala kwelinye icala kwaye kwelinye kwelinye kwaye wenze uphawu kumacala omabini.
Nje ukuba zonke iinkqubo zenziwe, bamba ikona yephepha uze uligobe embindini wephepha. Ngale ndlela, kufuneka sigobe zonke iikona kwaye ukuba sinesikwere esincinci.
Jika ibhokisi kwaye ujike zonke iikona zayo kwakhona ukuze uyinciphise kwakhona. Emva koko yigoqa ngesiqingatha, kwaye uphinde kwakhona de ufumane ibhokisi encinci.
Ngalo lonke ixesha uphawula kakuhle umphindi, ucinezela ngeminwe. Ngale ndlela sityhila isakhelo esincinci kwaye Sivula iithebhu ukusinika ubume obuchanekileyo.
Nje ukuba isakhiwo sele silungile kufuneka ufakele imibala kwiithebhu zemibala eyahlukeneyo kwaye phantsi kwayo imiyalezo okanye amabinzana.
Nje ukuba ugqibile ungaqala ukudlala nge-comecoco okanye ne-diviner, nokuba lukhetho olulungileyo.
2 Iplanethi yephepha
Ngumdlalo wesintu, olungele abantu abadala kunye nabantwana, kwaye uvela ekubeni yindalo kuba ungasebenzisa izinto ezihlaziyiweyo.
Inyathelo lokuqala lokwenza iphepha, uze ugobe ngehafu engabanzi. Landela le nkqubo ngokugoba iikona zesiphelo esinye, ubase kwiziko owawukade ubeluphawule ngaphambili. Songa iikona ezifanayo kwakhona apho ibikhona iziko langaphambili.
Emva koko kuya kufuneka ugobe ishipsi ebifanele ukuba ishiywe ziikhowudi ezimbini ezenziwe ngaphambili ukuya kwinqanaba lezinto zangaphambili. Qhubeka njengoko wenzayo okokuqala.
Ekugqibeleni, kufuneka wenze amaphiko angabhenceki kwelinye icala ezi zimbini ziphela zimalunga nesiqingatha. Omabini amacala kufuneka abenophinda-phindo olunye ukuze oku kusebenze.
Xa sele sigqibile kufuneka siphume siye kwindawo engqongileyo, ethi ngokukhetha kwayo iqhubeke umoya kwaye uyiqalise ngokokuhamba kwayo.
3 Inqanawa yephepha
Yeyona ndlela imnandi yokudlala ukuba uya emlanjeni okanye elunxwemeni, njengoko kunjalo ngeplanethi yephepha, ungasebenzisa iphepha elisetyenzisiweyo.
Iphepha lesikwere, kufuneka silisonge ngesiqingatha. Emva koko yehlisa iziphelo ezibini ukuya embindini wephepha ngokuzityhala kanzima ngeminwe ephindwe kabini ukuphakama okufanayo.
Isiphelo esisezantsi sisembindini, Siyajika senze inkqubo efanayo. Abomba ngeminwe yakho umngxunya owumba, phakamisa incam yangaphantsi de ifikelele encotsheni ephezulu.
Jika ibala wenze okufanayo, faka iminwe yakho kwimngxunya eseleyo kwaye uyisonge ukuze ibonakale ngathi yirobhothi. Thatha iphepha kuzo zombini iziphelo kwaye ulivule kude kube yinqanawa. Ekugqibeleni, uyibethelele emanzini kwaye iya kudada.
4 Isigqoko sephepha
Kwabaninzi, ukwenza umnqwazi wephepha kuvuthuza umbono, basiyisa emfazweni, amajoni, kunye namanye amabali amaninzi. Zikwaluncedo kakhulu kwimibhiyozo yemihla yokuzalwa okanye kumatheko ezinxibo.
Ukwenza oku kufuneka ugobe iphepha kwelinye kwaye uliphawule kakuhle ngeminwe yakho. Yivule kwaye uyithathe njengesikhokelo kamva.
Emva koko, vula icandelo elibanzi ngesiqingatha, kwaye udibanise kwaye ucoce iziphelo ezixineneyo ngokuqinileyo. Kuya kufuneka ugobe iimbombo zangaphezulu ukuya embindini, emva koko ugobe iikona ezingaphezulu zamacala omabini. Babase embindini wephepha
Emva kwexesha songa isithuba ecaleni komda ongezantsi, ngokuxhomekeka ekubeni iifayile ezimbini zihambelana kakuhle. Ke ngeminwe yakho uyivula emngxunyeni oshiyekileyo.
Ukuba unqwenela ukubeka ikiti ukuba ingawi entlokweni yakho nangaliphi na ixesha.
5 Indoda exhonyiweyo
Ngumdlalo wephepha omnandi kakhulu onokonwatyelwa ngabantu abaliqela, kwaye kufuneka nje ube nephepha elingenanto kunye nepensile.
Apha omnye wabadlali uya kucinga ngegama kwaye abeke imigca embalwa ethe tye kwileta nganye yegama.
Kuya kufuneka ubeke unobumba ekuqaleni okanye ukuphela. Kuya kufuneka uhambe uthi usiya kuqaphela igama.
Ngalo lonke ixesha esenza impazamo, utsala iinxalenye zedoli emathangeni. Ukuba uqikelela ngaphambi kokuba egqibe ukwenza unodoli uya kuphumelela, kungenjalo uya kuxhonywa.
Ungomnye wemidlalo elula ukuyenza kwaye ungonwabela kunye nabahlobo kunye nosapho. Bayakudinga kuphela iphepha elithe tyaba kunye nepensile yekhrayoni.
Ekuqaleni kufuneka ubeke igama elingaphezulu, igama lokugqibela, into, isixeko, umbala, izilwanyana kunye namanqaku. Omnye wabathathi-nxaxheba makatsho ileta ngokuvakalayo kwaye wonke umntu kuya kufuneka eqale ukuzalisa ibhokisi nganye. Owokuqala ukugqiba kufuneka athi igama uyeke.
Emva koko ngamnye uya kuthetha ngokuvakalayo ukuba yintoni ebhalwe ephepheni. Impumelelo nganye inexabiso lamanqaku e-100, ukuba impendulo iyafana neyomnye umthathi-nxaxheba ngamnye uya kushiyeka ngamanqaku e-50. Ekugqibeleni, oyena manqaku aphezulu aphumelele.
7 Iileta Iisuphu
Ngumdlalo omkhulu, uluncedo kakhulu ngezo ntsuku apho isithukuthezi sizele khona. Ingadlalwa kwiqela apho kuya kufuneka uhambise ikopi nganye.
Kwisiqwenga sephepha, kwenziwa ibhokisi ngoonobumba abahlukeneyo boonobumba abafihla amagama. Oku kunokuba tyaba, nkqo okanye idiagonal, eyona nto ibalulekileyo kukuzifihla kakuhle. Emazantsi kukho amagama aza kukhangelwa.
Ngubani ofumana amagama ngokukhawuleza ungoyena uphumelele. Kwakhona, ngumdlalo ophucula amandla akho okuqonda.
8 X kunye nee-zeros
Ungomnye wemidlalo yokulutha, xa sele uqalile akunakuyeka ukuyidlala. Kwiphepha sibeka imigca neebhokisi ze9.
Idlalwa ngabathathi-nxaxheba ababini, omnye kufuneka akhethe i-X kunye enye i-0. Baqala ukuzoba kwibhokisi nganye ibheji ekhethiweyo (x okanye 0), uphawu olunye kwicala ngalinye.
Kuya kufuneka bazalise iibheji ze3 zilandelwe ngokuthe tye, nkqo okanye ngokuthe nkqo. Owokuqala ukufikelela kwinjongo nguwo ophumeleleyo.
Ngumdlalo wephepha ngohlobo lwephazili yemathematics. Kuya kufuneka wenze igridi yezikwere ezi-3 × 3, apho kukho inani elincinci lamanani.
Injongo yomdlalo kukufumana iinombolo ukusuka kwi1 ukuya kwi9 ngaphandle kokuphindaphinda kwibhokisi nganye. Ingasetyenziswa nabantu abaliqela okanye bayisebenzise bodwa, into ebalulekileyo yile Ixesha ngalinye hlula ubuchule bengqondo.
10 Amagama enqamlezo
Ngumdlalo wamaphepha wakudala apho kwenziwa ibhokisi enomzobo igridi, idlalwa yodwa. Injongo yayo kukufumana amagama ahlala kwiibhokisi ezithile, kulandela imikhondo ephambili enikezwe ekuqaleni.
Amagama ahlulahlulwe abe zizitshixo ezithe tye okanye nkqo. Ngamnye unenombolo ehambelana nomzimba wepuzzle yamagama anqamlezileyo, imikhondo abaninika yona inokuba yimibuzo okanye iinkcazo.
Okokugqibela, ngamnye wale midlalo unika isibonelelo sokuba wenziwe ngephepha kuphela. Iyajika ibe sisixhobo esilula kakhulu ukufumana okanye ukusebenzisa iphepha elinokuphinda lisebenze.
Ngokuqinisekileyo uya kukunika amaxesha okonwaba, Kuya kufuneka ukhethe okona kubonisiweyo Ngawo wonke umzuzu. Ukwazi indlela yokwenza iphepha lemidlalo kuya kuba luncedo kakhulu kwiipati zakho, iintlanganiso kunye nexesha lokuzonwabisa.
1 Yintoni umdlalo wephepha?
2 Zeziphi iintlobo zemidlalo esinokuthi sizenze ekhaya?
2.1 1 Ikomkomoti
2.2 2 Iplanethi yephepha
2.3 3 Inqanawa yephepha
2.4 4 Isigqoko sephepha
2.5 5 Indoda exhonyiweyo
2.6 6 Yima
2.7 7 Iileta Iisuphu
2.8 8 X kunye nee-zeros
2.9 9 Suduko
2.10 10 Amagama enqamlezo
Fumanisa ukuba ungazifumana phi izinto zokudlala ezinqabileyo kwi-intanethi